Divorce through mediation | Law & More BV
blog » Orgba alụkwaghịm site na nghọtahie
Orgba alụkwaghịm site na nghọtahie
Orgba alụkwaghịm na-agakọ mgbe niile n'etiti ndị mmekọ. Mgbe gị na onye gị na ya na-akpa wee ghara ikwenye n’otu, esemokwu ga-ebilite nke na n ’ọnọdụ nwere ike ịkawanye njọ. Sometimesgba alụkwaghịm nwere ike wepụta mmadụ ihe ọjọọ mgbe ụfọdụ n'ihi mmetụta ha. N'ụdị oge ahụ, ịnwere ike ịkpọ ndị ọka iwu ka ị nweta ikike gị. Ọ ga - enwe ike ịmalite usoro iwu gbasara gị. Agbanyeghị, enwere ezigbo ohere na ụmụ gị ga-ata ahụhụ nke ukwuu n'ihi nke a. Iji gbochie esemokwu ndị a, ị nwekwara ike ịhọrọ ịgba alụkwaghịm site na ịgbanye onwe ya. Na omume, a na-akpọkarị nke a ịgba alụkwaghịm.
Onye obula nwere esemokwu choro iwepu ya ozugbo enwere ike. Otutu mgbe esemokwu abatala n’uzo di elu nke na ha abuo ndi ohuru ahughi. Ogbugbu nwere ike ịgbanwe nke ahụ. Onye ogbugbo bụ mkpebi ngọngọ nke esemokwu na enyemaka nke onye ọka ikpe na-anọpụ iche: onye ogbugbo. Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara mediation n'ozuzu anyị ibe okwu.
Kedụ uru dị n'ịgba alụkwaghịm?
Divorcegba alụkwaghịm ahaziri nke ọma nwere ike ịkpata iru uju na iwe ruo ọtụtụ afọ. Mmekọrịta bụ ụzọ isi rute na nkwonkwo nkwukọrịta, dịka ọmụmaatụ gbasara otu esi emeso ụmụaka, nkesa ego, alimoni na nkwekọrịta banyere ezumike nka.
Mgbe ndị otu nwere ike ịbịarute nkwekọrịta na usoro ịgba mgba, anyị ga-etinye nke a na nkwekọrịta mmezi. Nke a mechara, ụlọ ikpe ga-akwado ịme nkwekọrịta a.
Na ịgba alụkwaghịm ebe ndị otu ahụ na-eche ibe ha n'ụlọ ikpe, otu n'ime ha ga-enwekarị ụzọ ya na ndị ọzọ na-emefu ego, dị ka a pụrụ isi kwuo ya. N'okwu ọnụnọ, enweghị ndị ga-efu ihe. N’okwu anya, a na-anwa idozi nsogbu ọnụ, ka ọnọdụ mmeri wee ruo mmadụ abụọ ahụ. Nke a dị mkpa karịsịa ma ọ bụrụ na ndị otu ọlụlụ ga-enwe ọtụtụ nsogbu mgbe ịgba alụkwaghịm ahụ. Ke uwụtn̄kpọ, kere ban̄a idaha oro nditọwọn̄ ẹsịnde. N'okwu ahụ, ọ dị mkpa na ndị bụbu ndị mmekọ ha ka nwere ike ịga otu ọnụ ọnụ mgbe ha gbasịrị alụkwaghịm. Uru ọzọ dị n’etiti mmadụ n’ihu bụ na ọ na-adị ọnụ ala ma na-arọ obere karịa n ’ụlọ ikpe dị ogologo.
Kedu otu onye ogbugbo si arụ ọrụ?
N'okwu ọnụnọ, ndị ọzọ na-agwa ibe ha okwu site na ntụzi aka nke onye ọka ikpe. Onye ọka ikpe bụ onye ogbugbo n’onwe ya, ya na ndị ọzọ na -achọ ngọngọ ga-anabata onye ọ bụla. Onye ogbugbo ọ bụghị naanị na-eleba anya na iwu kwadoro ikpe a, kamakwa na nsogbu ọ bụla kpatara nsogbu. Ndi ozo biara na nzuko a, nke onye ogbugbo ahu debara na nkwekorita idozi ya. Onye ogbugbo ekwupughi echiche. Ya mere mgbanye uche dị na uche ịbanye na nkwekọrịta ọnụ, na ntụkwasị obi. Usoro ngbanwe a dị nro karịa n ’ụlọ ikpe. Ugbu a ejirila nkwekọrịta ndị a meekọrịta ihe, enwerekwa ohere dị ukwuu nke ndị ọzọ ga-agbaso na ya.
Onye ogbugbo ahụ na-ahụ na otu abụọ ahụ nwere ike ịkọ akụkọ nke ha nakwa na a na-ege ibe ha ntị. N'oge mkparịta ụka ya na onye ogbugbo ga-enwe nlebara anya zuru oke maka mmetụta nke ndị ọzọ. Ekwesịrị ịtụle mmetụta uche tupu enwere ike ịme nkwekọrịta dị mma. Na mgbakwunye, onye ọka iwu na-ahụ anya na nkwekọrịta nke ndị otu ahụ mere ziri ezi n'iwu.
Nzo ukwu anọ n’otu n’otu
N'ajụjụ ọnụ ahụ. N'ajụjụ ọnụ mbụ, onye ogbugbo ahụ kọwara nke ọma ihe onye ogbugbo ahụ bụ. Ndị otu ahụ bịanyere aka na nkwekọrịta esemokwu. N'ime nkwekọrịta a, ndị otu ahụ kwenyere na mkparịta ụka ahụ dị nzuzo, na ha ga-ekere òkè na afọ ofufo na na ha ga-esonye na mkparịta ụka ahụ. Ndị otu dị na ha nwere onwe ha ịhapụ ịkwụsị agba agbawa oge ọ bụla.
Usoro nyocha ahụ. N’okpuru nduzi nke onye ogbugbo, a na-enyocha esemokwu ahụ ruo mgbe echiche niile na mmasị niile doro anya.
Usoro mkparita uka a. Zọ abụọ a na-ewepụta ihe ga-ekwe omume. Ha na-eburu n’uche na osisa ga-adịrị ma ndị otu abụọ mma. N'ụzọ dị otu a, a na-eme nkwekọrịta dị mkpa.
Mee oge atọrọ. Onye ogbugbo ga-emesịa detuo nkwekọrịta ndị a niile dịka ọmụmaatụ, nkwekọrịta mmezi, atụmatụ nne na nna ma ọ bụ ọgbụgba alụkwaghịm. A na-edoziri nke a n'ụlọ ikpe maka nkwado.
Ichoro i hazie ilu gi site na ime nkwonkwo? Ka ị ga - achọ ịma ma ịgbanye aka n’agha ọ̀ ga - abụụrụ gị ezigbo nsogbu? Nwere onwe gị ịkpọtụrụ ọfịs anyị. Obi ga-adị anyị ụtọ inyere gị aka ịhọrọ oke maka nghọtahie.
Previous Post Nchụpụ nke ezi uche dị na ya
Next Post Orgba alụkwaghịm na ụmụaka